Sida Loo Sameeyo Focaccia Farshaxanka Cunnada Khudaarta + Dhirta - Sugar Geek Show - Roodhi Khamiir
Recipe Focaccia Rootiga Farshaxanka
Farshaxanka rootiga Focaccia waa isbeddel cusub oo aad ku qurxinayso focaccia khudradda cusub iyo geedo yaryar si aad u sameyso farshaxan qurux badan oo la cuni karo
Sameynta farshaxanka rootiga focaccia ma aha oo kaliya madadaalo laakiin waa dhadhan fiican! Shaqooyinkan farshaxanka ah ee la cuni karo oo ay dhiirrigeliyeen curinta Beerta canabka oo ku taal barta Instagram waa madadaalo loogu talagalay qoyska oo dhan inay sameeyaan. Waxaan kugula talinayaa inaad hal qeyb oo focaccia ah kalabar u goyso si aad u sameyso laba xabbo oo rooti yar yar oo aad u qurxiso si shaqsi ah. Taasi waa waxa aan ku sameeyay gabadhayda oo qarax ayaa na qabsaday!
Waxaan doonayay inaan isku dayo isbadalkan farshaxanka roodhida focaccia mudo dheer. Waxaan ku waashay fanka rootiga sixirka ah ee aan ku arko bogga dubista beeraha . Waxa aan ugu jeclahay waa gabbaldayaha loo yaqaan Vincent Van Dough. Waan jeclahay roodhida roodhida fiican! Waxaan u maleynayaa inaan noqon karno saaxiibo fiican.
Waqtiga qoraalkan blog-ka, adduunku wuxuu ahaa mid karantiil ah sidaa darteed maalmaheenna waxaa ka buuxa mashaariic badan oo madadaalo leh si aan nafteenna iyo carruurta ugu mashquulno. Kani wuxuu ahaa mashruuc madadaalo ugu fiican aniga iyo Avalon oo shan jir ah iyo inaan wada qabanno.
Kaliya waxaan soo diyaariyay dhamaan maaddooyinka iyo focaccia kahor waqtiga sidaa darteed waxa kaliya ee ay ahayd inay sameyso ayaa ahaa qurxin!
Maxay yihiin waxyaabaha ugu fiican ee loogu talagalay farshaxanka rootida focaccia?
Kuwani waa noocyada maaddooyinka aad u isticmaali karto inaad ku qurxiso farshaxankaaga rootiga. Ku hel hal-abuur waxa aad haysato!
Basasha cas - si khafiif ah loo jarjaray si ay ugu ekaadaan ubax
Basbaaska yar yar - si toos ah ayaa loo jarjaray (si ay wareega u ahaadaan) si ay ugu ekaadaan ubaxyo yaryar ama si goos goos ah loo jaro (jajab) si loo sameeyo ubaxyo waaweyn!
Chives - Samee ubax ubax weyn
Basasha Cagaaran - Sidoo kale samee ubax ubax weyn ama geed-bulsheed
Dhir - Ku habboon caleemaha
Basil - Sidoo kale waa ku fiican yahay caleemaha ama caleenta badda
Yaanyada Cherry - Lagu jarjaray dherer nus-caqli leh oo lagu qalajiyey tuwaal warqad ah. Wuxuu sameeyaa xarumo ubax oo waaweyn ama jiingado abuur ah
Saytuun - Dhagaxyada ama xarumaha ubaxyada
Capers - Qeybaha iniinyaha
Rosemary - Dhirta yaryar
Thyme - Dhirta yaryar
Pepperoni - Waxaan u qaabeynay kalluunkeena
Sausage - Xarumaha ubaxa ama iniinyaha iniinyaha
Parmesan la jeexay - Ciid ama wasakh
Tamaandho - Isticmaal mindi af badan si aad u samayso ubax yaanyo !
Sidee u sameysaa farshaxanka rootida focaccia?
Ku bilaw cuntadeyda fudud ee rootiga focaccia. Waxaan isku daraa cajiimkan habeenka ka horreeya intaanan dubin. Caddaynta dheer ee qaboojiyaha waxay siinaysaa dhadhan iyo qurxin qurux badan leh oo leh qolof khafiif ah.
sida loo sameeyo buttercream u ekaado qof jecel
Waa tan sida waqtigeygu u egyahay si aad horay u sii qorsheyso.
sida loo jeclaado dhaxan
Maalinta 1 - Galabtii ama galabtii, waxaan isku daraa cajiinkayga focaccia waxaanan u dhigaa halsano badan (kac) aag diiran (70ºF). Tani waxay qaadataa meel kasta oo ka mid ah 2-3 saacadood sababtoo ah qaddarka badan ee saliidda ee cajiinka waxayna kuxirantahay sida qolkaagu u diirran yahay. Kulaylku waa, sida ugu dhakhsaha badan cajiinka ayaa u kici doona.
Ka dib markii gurigaaga cajiinka uu laba-jibbaarmay, ku tuur dusha shaqadaada. U kala qaybi cajiinka laba qaybood haddii aad rabto.
Diyaarso laba xaashi oo leh lakab khafiif ah oo saliid saytuun ah oo daboolaya dusha oo dhan.
Ku duub cajiinka digsiga. Aniga tayda waan soo gaarey ilaa geesaha maxaa yeelay waxaan sameeyey dufcad duub ah laakiin haddii aad isticmaaleyso hal dufcadood, kaliya ku qaabee bartamaha bartanka inta aad kari karto. Halkan waxaa ku yaal tusaale qurux badan oo ka socda Beerta Canabka.
Ku dabool saxankaaga xaashi caag ah si aad uga ilaaliso cajiinka inuu qallalo ka dibna ku dheji qaboojiyaha habeenkii caddeynta labaad.
Maalinta 2 - Focaccia-gaaga ka soo saar qaboojiyaha oo u oggolow inuu heerkulka qolka ku soo dhowaado illaa 30 daqiiqo. Waxaad dooneysaa in cajiinka uu fiicnaado oo xumbuubo kahor intaadan bilaabin qurxinta si cajiinka uusan uqarin khudaartaada. Waxaan jecelahay inaan udiyaar garoobo inta ay focaccia kululaaneyso.
Yaree dusha sare ee focaccia-gaaga sida caadiga ah, ku dar saliid saytuunkaaga ah iyo milix flake ah. sida lagu faray karinta. Hadda waxaad diyaar u tahay inaad qurxiso! Waalan! Baashaal! Farshaxanka ku dheji farshaxanka rootida ee focaccia!
Ka dib markaad kor u qaaddo focaccia, ku dhaji geedaha oo dhan lakab saliid saytuun ah si looga ilaaliyo inay gubtaan intaad karineysid.
kareem oo ah dhalo labeen kareem ah
Fikradaha farshaxanka rootida ee Focaccia
Hadda waa waqtigii aad ku abuuri lahayd farshaxanka rootida focaccia! Adeegso mala-awaalkaaga! Haddii aad ka raadiso farshaxanka rootida focaccia Pinterest waxaad arki doontaa TONS waxyoon ah!
Waxaan doonayay inaan sameeyo ubaxyo badan intii suurtagal ah sidaa darteed taydu waxay u egtahay sida ubax ubax.
Avalon waxay gashay hoosta mawduucyada badda sidaa darteed kalluun faro badan iyo xayawaan badeed dusheeda ayaa saaran. Waxaan si gaar ah u jeclahay sida Avalon uu u isticmaalay caleenta la jarjaray sidaas darteed waxay u ekaayeen dabaal octopus. Sidaas xariif ah.
Labaduba waxay ahaayeen kuwo macaan!
Haddii aad hayso wax roodhi ah oo hadhay, ku dabool duub balaastig ah kuna kaydso qaboojiyaha. Waxaad ku karisaa 10 daqiiqo foornada 350ºF si aad u cusbooneysiiso ka hor intaadan cunin waxayna dhadhamin doontaa sida ugu wanaagsan ee cusub!
Tani fudud focaccia recipe ayaa ugu fiican! Kaliya isku qas, nasasho, kala bixi oo qabooji habeen si aad ugu oggolaato dhammaan dhadhankaas cajiibka ah inay horumariyaan. Wanaagsan u adeegsiga saldhig ahaan kuwa mashaariicda farshaxanka roodhida focaccia quruxda badan. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:25 daqiiqado Nasasho:1 d 25 daqiiqado Kalori:168kcal
▢16 ounces (454 g) biyo diirran (110ºF) oo loo qaybiyay laba maddiibadood 2 koob
▢1 Miisaska cuntada sonkorta granulated
▢7 garaam (7 garaam) khamiir qalalan oo firfircoon (2 1/2 qaado shaah)
▢laba ounces (57 g) saliid saytuun ah 1/4 koob
▢1 qaaddo shaaha cusbo
▢1 Miisaska cuntada cusbo flakey
▢24 ounces (680 g) bur rootiga ama bur dhan-ujeedo leh (5 koob oo go'an oo siman)
▢4 ounces (113 g) saliid saytuun ah digsiga iyo qulqulaya dusha sare ee focaccia ka dib markii uu kacay (1/2 koob)
▢laba Miisaska cuntada lagu kariyo rosemary cusub la jarjarey
▢ Khudaarta, dhirta iyo hilibka si kor loogu qaado
▢Istaag mashiinka leh jumlada cajiinka
Isku dar koobkaaga ugu horeeya ee biyo diirran khamiirkaaga iyo sonkortaada kuna dar isku dar. Dhinac dhig ilaa 5 daqiiqo ama illaa ay u egtahay xumbo
Ku rid isku-darka biyaha / khamiirka weelka isku-darka miiskaaga oo leh roodhida ku xidhan. Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa cajiinkaan gacmo weel iyo qaaddo laakiin waa inaad isticmaashaa xoogaa xusul dufan ah.
Ku dar qiyaastii 1 koob oo bur ah oo isku walaaq hoose illaa inta la isku darayo
Ku dar inta kale ee biyahaaga, saliida saytuunka iyo milixda iyo kala badh burkaaga hadhay. Isku qas hoose illaa aad kareyso
Ku sii wad inaad ku darto burkaaga inta aad isku dhex dardarayso illaa cajiinka uu ka baxayo dhinacyada baaquli. Hadday weli dheg dheg tahay, ku dar laba qaado oo kale oo bur ah ilaa ay isku wada yimaadaan. Cajiintu aad bay u jilicsan tahay in kastoo
Ku sii qas isku darka hoose ilaa cajiinkaagu uu soo baxo gluten kugu filan oo ah markaad taabato, dib ayuu u soo noqdaa. Cajiimadaydii ayaan kala soo baxay saxankii waxaanan ku dhammeeyay miiskii miiska dushiisa ilaa 2 daqiiqo ilaa cajiintu dib u soo laabatay.
U dhig cajiinkaaga baaquli ay ku jirto qiyaas ahaan miisaska saliidda saytuunka ah. Ku dabool duubka balaastigga ah oo ha u kiciyo meel diirran 1-2 saacadood ama illaa ay ka labanlaabmayso cabirkeeda. Haddii aad isticmaaleyso khamiir qalalan oo firfircoon, waxay qaadan doontaa waqti dheer si loo caddeeyo in labanlaabo. Isha ku hay.
Ku shub saliid saytuun ah oo kugu filan digsi xaashi ah 12'x17 '(ama digsi kasta oo la mid ah) sidaas darteed waxaa jira lakab khafiif ah oo saliid ah oo daboolaya gunta hoose ee digsiga.
Saliid saytuun ah mari gacmahaaga si aad iskaga ilaaliso inaad ku dhejiso ka dibna ka soo saar cajiinka focaccia baaquli. Waxay noqon doontaa mid aad u dabacsan U qaybi laba hadaad qashin gasho. Digsiga dhig oo bilow inaad kala fidiso. Haddii ay dib u yaraato, iska tag illaa 15 daqiiqo si aad ugu oggolaato gluten inuu ku nasto ka hor intaadan mar kale kala bixin. Ha ka welwelin inaad gaadho geesaha haddii aad kala badh u kala qaaddo.
Mar alla markii aad fidiso fidintaada, ku dabool bac balaastik ah oo dhig qaboojiyaha habeenkii si aad u yeelato dhadhan.
Markaad diyaar u tahay inaad dubto rootigaaga, kala soo bax qaboojiyaha oo u oggolow inuu kululeeyo illaa 30 daqiiqo. Ku yaree dusha farahaaga saliida leh si aad u abuurto meelo ay saliida saytuunka ka soo ururin karto.
Ku daadi saliid saytuun ah qadar fiican rootiga dusheeda ilaa inta dimple-yada oo dhan ay ku leeyihiin saliid yar. Ku saydh cusbada flakey dusheeda.
Ka dib marka ay focacciaadu kacdo 30 daqiiqo, ku qurxi dusha sare hab kasta oo aad jeceshahay khudaarta cagaaran, geedo yaryar iyo hilib. Eeg qoraalka barta sare ee fikradaha badan.
Ku caday dhammaan khudaartaada iyo geedahaaga saliid saytuun badan si aad uga hortagto gubashada.
Waxaad ku karisaa foornada 450ºF illaa 20-25 daqiiqo ama ilaa rootiga focaccia uu fiican yahay oo dahab yahay.
Kala bixida dartii, rootigan ayaa sida ugu wanaagsan loogu raaxeystaa maalinta. Hadha qaboojiyaha. Dib-u-kululaynta rootiga foornada 5-10 daqiiqo at 350ºF ayaa dib u soo celin doonta muuqaalkaas calalinta ah.
Waxaan dhigaa cajiinkayga meel u dhow foornadayda oo loo dhigay 170ºF si ay uga caawiso cajiinka inuu kaco. Miinadaydu badanaa waxay qaadataa oo keliya 1 saac haddii qolkaygu diiran yahay. U oggolow focaccia-gaaga qabow inuu kaco 30 daqiiqo ka hor intaadan qurxin si looga hortago cajiinka inuu daboolo duleelka Ku caday dusha sare saliidda cuntada si aad uga ilaaliso gubista foornada
U adeegida:1adeegaya|Kalori:168kcal(8%)|Kaarboohaydraytyada:kow iyo labaatang(7%)|Protein:4g(8%)|Dufan:8g(12%)|Dufan Dufan:1g(5%)|Sodium:1mg|Kaliumperyamper:31mg(1%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:1g(1%)|Vitamin A:5IU|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:5mg(1%)|Bir:1mg(6%)
Cake Champagne Cake
Cunto Cunto Shukulaatada Cadaan ah
Shukulaatada Caramel Shukulaatada
sida loo daweeyo isku darka keega
sida loo sameeyo keeg cawlan
sida loo sameeyo rose gold fondant dahab
sida loo sameeyo dhadhanka keeg sanduuqa sida keega guryaha lagu sameeyo
sameynta keeg leh fondant markii ugu horeysay
Keegga 'Buche de Noel' waa keeg fudud iyo hawo isbuunyo hawo leh oo laga buuxiyey shukulaatada subagga leh isla markaana la qaboojiyey ganache si ay ugu ekaato geedka yule.
Heerka Xirfadda: Newb Baro sida loo sameeyo cuntada aan jeclahay ee gumpaste ee uu qoray Nicholas Lodge. Ku habboon sameynta ubaxyo sonkor ah oo qurux badan.
Recipe Malab Qamadi ah oo Qamadi ah
Cunto malab fudud oo rootiga qamadiga ah oo ku diyaarsan wax ka yar 60 daqiiqo oo aad uga fiican dukaanka la iibsaday!